အီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက်ဆေးခြောက် Infuser လိုင်စင် | သင်သိရန်လိုအပ်သမျှ
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ရှိဆေးခြောက်ထုတ်ယူမှုအတွက် Infuser လိုင်စင်များ
သင်ဘယ်လိုအီလီနွိုက်ပြည်နယ်အတွက်ဆေးခြောက် infuser လိုင်စင်ရသနည်း
Infuser တစ်ခု လိုင်စင် ဆေးခြောက်ကိုထည့်သွင်းထားသောဆေးခြောက်ကိုကုန်ကြမ်းသို့တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းထားသောစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစိုက်ပျိုးရေးဌာနမှလိုင်စင်ရမည်ဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိရန်အတွက်လိုအပ်ချက်အနည်းငယ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည်။
Cannabis Extracts တစ်ခါတစ်ရံပျားရည်နှင့်ဆင်တူသည်
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောထိုလိုအပ်ချက်များကိုကြည့်ပါ။ ဆေးခြောက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက် infuser လိုင်စင်ချထားပေးသူများအတွက်ဥပဒေမှသတ်မှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့လည်းတင်ပြပါမည်။
ဆေးခြောက် Infuser လိုင်စင်များထုတ်ပေး
၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လအစတွင်ဖြစ်သည် စိုက်ပျိုးရေးဌာန infuser အဖွဲ့အစည်းကလိုင်စင် ၄၀ အထိထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ အဆိုပါလိုင်စင်များအတွက်လျှောက်လွှာများကို ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်မှစတင်ပြီး Illinois infuser လိုင်စင်လျှောက်လွှာ ၀ င်းဒိုးသည် ၂၀၂၀၊ မတ်လ ၁၅ ရက်တွင်ပိတ်လိမ့်မည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အကုန်တွင်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဦး စီးဌာနအနေဖြင့်အများဆုံးအသုံးပြုမည့်အဖွဲ့အစည်းလိုင်စင် ၆၀ ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ဤရက်စွဲမတိုင်မီဌာနသည်ဤနံပါတ်ကိုပြောင်းလဲမည့်စည်းမျဉ်းများကိုချမှတ်နိုင်သည်။
infuser လိုင်စင်လျှောက်ထားသူအရေအတွက်တိုးမြှင့်ရန်ဌာနအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ infuser လိုင်စင်အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အတားအဆီးများကိုလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်အတွက်လိုင်စင်လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲရန်။ ”
infuser လိုင်စင်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့ချရာတွင်စိုက်ပျိုးရေးဌာနကထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များမှာ -
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဦး စီးဌာနအနေဖြင့်ဖြည့်တင်းရန်အသုံးပြုသည့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းမရှိပါ။
အီလီနွိုက်ဆေးခြောက် Infuser လိုင်စင်လျှောက်လွှာ
အီလီနွိုက်စ infuser လိုင်စင်လျှောက်လွှာကိုအီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ လျှောက်လွှာတင်သည့်အခါအောက်ပါလိုအပ်သည်:
ပြန်အမ်းမရသည့်အီလီနွိုက်ပြည်နယ် infuser လိုင်စင်လျှောက်လွှာကြေး။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤရက်စွဲပြီးနောက်စိုက်ပျိုးရေးဌာနသည်ပိုမိုမြင့်မားသော (သို့) အောက်နိမ့်သောအခြားပမာဏကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ဒီအခကြေးငွေကိုဆေးခြောက်စည်းမျဉ်းရန်ပုံငွေသို့အပ်နှံလိမ့်မည်
အပြည့်အဝအစီရင်ခံစာနှင့်အတူ "ဟုအဆိုပါ infuser ၏ကျောင်းအုပ်ကြီးအရာရှိများသို့မဟုတ်ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကိုမဆိုရသောအုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသေးစိတ်
(ဈ) အပြစ်ရှိကြောင်းကြေညာခြင်း၊ ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်လိုင်စင်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသည်
(ii) အပြစ်ရှိကြောင်းပြတ်ပြတ်သားသားအပြစ်ရှိသည်ဟုစီရင်ခြင်းခံရပြီးဒဏ်ငွေချမှတ်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်လိုင်စင်ကိုဆိုင်းငံ့ထားခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းခံရသည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ဘုတ်အဖွဲ့တွင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့မဟုတ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်း”
ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်နှင့် ၀ န်ထမ်းစီမံချက်တို့ပါ ၀ င်သည်
ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံနှင့်စီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်တွင် (သို့) လူသားစားသုံးမှုအတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်သည့်ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်လျှောက်ထားသူများ၏အတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြသည့်ဖော်ပြချက်။
စိုက်ပျိုးရေးဌာနသည် infuser organisation လျှောက်လွှာအားအောက်ပါအကြောင်းများကြောင့်အရည်အချင်းမမှီပါ။
လျှောက်ထားသူသည်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုမပေးပါ တခါတရံမှာ စိုက်ပျိုးရေးဌာနသည်အချက်အလက်ပျောက်ဆုံးနေသောလျှောက်လွှာကိုလက်ခံရရှိပါကလယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဌာနမှလျှောက်ထားသူအားချို့တဲ့သောအသိပေးချက်ကိုထုတ်ပြန်နိုင်သည်။ လျှောက်ထားသူသည်မပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ပေးပို့ရန်အတွက်ချို့တဲ့သည့်အကြောင်းကြားစာနေ့မှပြက္ခဒိန်ရက် ၁၀ ရက်ရှိရမည်။ ”
ဆေးခြောက် Infuser လိုင်စင်များကိုအီလီနွိုက်ပြည်နယ်တွင်မည်သို့ထုတ်ပေးမည်နည်း
စိတ်ဝင်စားသော infuser အဖွဲ့အစည်းလျှောက်ထားသူများ၏လျှောက်လွှာကိုအမှတ်ပေးသည့်စနစ်တစ်ခုကိုစိုက်ပျိုးရေးဌာနမှတင်ပြရန်လိုအပ်သည်။ အမြင့်ဆုံးရမှတ်ရရှိသူများသည် infuser organisation လိုင်စင်ကိုပထမ ဦး ဆုံးရရှိလိမ့်မည်။ အမှတ်ပေးသူသည် infuser အဖွဲ့အစည်းလျှောက်ထားသူလျှောက်ထားသောအချက်အလက်များ၊ အဖွဲ့အစည်း၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်လျှောက်လွှာပုံစံ၏ရှင်းလင်းမှုအပေါ်အခြေခံသည်။
မှတ်တမ်း - လုံခြုံရေးနှင့်အစီအစဉ်
လူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းနှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်ရန်စီစဉ်ထားသော infuser အဖွဲ့အစည်းများသည်နောက်ထပ်အချက်များကိုရရှိလိမ့်မည်။ Infuser အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည်ရပ်ရွာနှင့်ပူးပေါင်းလိုသည့်ဆန္ဒကို“ အောက်ပါလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု (သို့) တစ်ခုထက်မကပါ ၀ င်ခြင်းဖြင့်ပြသနိုင်သည်။
(ဈ) လူမှုသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူများအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မှီမည့်သူများကဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်တင်ကူးပရိုဂရမ်တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်း၊
(၃) ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှုအန္တရာယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအားပညာပေးခြင်း။ ဒါမှမဟုတ်
()) လျှောက်ထားသူအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်ကတိက ၀ တ်ပြုမှုကိုပြသသည့်အခြားအစီအမံများ” ။
ဟုတ်ပါသည်၊ စိုက်ပျိုးရေးဌာနသည်လျှောက်ထားသူသည်သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာခြင်းမရှိဟုခံစားရလျှင်လျှောက်လွှာကိုငြင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အောက်ပါအခြေအနေများပေါ်ပေါက်လာပါကလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်းကိုငြင်းပယ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အဓိကအရာရှိများသည်အသက် ၂၁ နှစ်အောက်ရှိလျှင်
ဆေးခြောက် Infuser အဖွဲ့အစည်းလျှောက်လွှာလိုအပ်ချက်များ
infuser အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်မှာ -
စာရင်းပြုစုခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးစနစ်များ၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ထမ်းစီမံချက်အသေးစိတ်တို့ကိုဖော်ပြထားသောပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုစာရွက်စာတမ်း
မတူညီသောခွဲဝေပေးသောအဖွဲ့အစည်းများသို့ရောင်းချသည့်အခါ infuser အဖွဲ့သည်စျေးနှုန်းများကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုတားမြစ်သည်။ infuser အဖွဲ့အစည်းများမှပြုလုပ်သောကုန်ပစ္စည်းအားလုံးသည်အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး ၀ ယ်သူများအားလုံးအတွက်စျေးနှုန်းတူညီရန်လိုအပ်သည်။
ဆေးခြောက် infuser လိုင်စင်အပေါ်နောက်ဆုံးအတွေးများ
အထက်ဖော်ပြပါအချက်များသည် infuser အဖွဲ့အစည်းများတည်ထောင်ရန်ရှာဖွေသူများအတွက်ဥပဒေမှသတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်အချို့မျှသာဖြစ်သည်။ အရာများပြောင်းလဲမှုကိုဆက်လက်ဆက်လက်မျှော်လင့်နေကြသည်အဖြစ်ပိုပြီးလိုအပ်ချက်များကိုရှိလိမ့်မည်။ ဤလုပ်ငန်းနယ်ပယ်သို့ ၀ င်ရောက်လိုသူများသည်ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများနှင့်ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်လိုအပ်သည်။
အောင်မြင်ဖို့အတွက်သင်ဟာaဆေးခြောက်ရှေ့နေချုပ် လိုင်စင်လျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည့်လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုနားလည်ရန်သင့်အားမည်သူကူညီနိုင်သည်။ သင်၏လျှောက်လွှာကိုပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်သေချာအောင်လုပ်လိမ့်မည်။ ရှေ့နေတစ် ဦး အနေဖြင့်လည်းဥပဒေနှင့်အညီဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်လွယ်ကူလိမ့်မည်။
Infuser လိုင်စင် - သင်အီလီနွိုက်စ်တွင်အမြတ်ရရန်အညိုရောင်လိုချင်လျှင်သင်ရရှိသောခွင့်ပြုချက်။
ဟေ့ငါ tom - ဆေးခြောက်ရှေ့နေ googling အားဖြင့်ငါ့ကိုရှာပါသင်၏အသင်းရှိသမျှမေးခွန်းများကိုမေးရန်, ငါ့ website ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့နေကိုသွား။ Infuser လိုင်စင်ဖြင့်ယနေ့ - အီလီနွိုက်သည်အနောက်ဘက်ရှိပရိုဆက်ဆာလိုင်စင်များထက်အနည်းငယ်ကွဲပြားသောအရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် - ကျွန်ုပ်တို့သည်နက်နက်နဲနဲငုပ်လျှိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပတ်ပတ်လည်တွင်ကပ်ထားပါ။ မည်သည့်အချိန်တွင်ရှုပ်ထွေးမည်ကိုသင်မည်သို့ထုတ်ယူမည်ကိုငါပြောပြလိမ့်မည် က infuser လိုင်စင်မှလာသည်။
ဒါကြောင့်မှတ်ပုံတင်ပါ၊ စာရင်းသွင်းပါ၊ မှတ်ချက်များတွင်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါ၊ လက်မထောင်ပါနှင့်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့များကို Legalization News မှသင့်အားတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ယခုထုထည်ထားသော Infuser လိုင်စင်ကိုဝင်ကြည့်ကြပါစို့။
ag ၏အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဌာနသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် infuser လိုင်စင် ၄၀ နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာတွင်နောက်ထပ် ၆၀ ကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ၂၀၂၂ နောက်ပိုင်းတွင်လိုင်စင်မည်မျှရှိမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိရသေးပေ။ သော။ ၎င်းသည်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောကုန်ပစ္စည်းများအားလုံလောက်မှုအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏စားသုံးသူများမည်သို့သတ်မှတ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မည်ထင်သည်။ သင်ဝယ်မလား
အာကာသကိတ်မုန့်? အညိုရောင်အိုး? အခက်ခဲဆုံးသကြားလုံးများ - ကျွန်ုပ်အတွက်ရွှေစံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သော Lagunitas အသစ် THC-brau ။ HiFi သည်ယခုကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ကော်လိုရာဒိုတွင်ရှိပြီး ၂၀၂၁ တွင်အီလီနွိုက်စ်ဖြစ်သည် သင်သိသည့်အတိုင်း Lagunitas တွင် Chicagoland inရိယာ၌ taproom တစ်ခုရှိသည်။
မှတ်ချက် - infuser လိုင်စင်ဟာပြည်နယ်ကပေးတဲ့လိုင်စင်ကြေးကိုရောက်ရင်ဈေးအသက်သာဆုံးဖြစ်တယ်။ လျှောက်ထားရန်မှာ ၅ ခန်းဖြစ်ပြီးနောက် ၅ ခုအနိုင်ရသည်။ ထို့နောက်နှစ်စဉ်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ပေးချေသည်။
လျှောက်လွှာများကို ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီလတွင်ထွက်ပေါ်လာမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထပ်မံရရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်လျှောက်လွှာတွင်အဓိကအရာများသည်ဥပဒေကိုယ်နှိုက်သာဖြစ်သည်။
ဒါဟာတခြားနဲ့မတူပါဘူး ဆေးခြောက်လိုင်စင်။ ကုမ္ပဏီ၏မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်၊ မှတ်တမ်းများသိမ်းခြင်း၊ ၀ န်ထမ်းအစီအစဉ်၊ လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များနှင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းများကိုထုတ်ဖော်ခြင်းနှင့်အစီအစဉ်များစွာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်မည်သည့်အုပ်ချုပ်ရေးသို့မဟုတ်တရားစီရင်ရေးတရားစွဲဆိုမှုကိုထုတ်ဖော်ရန်ရှိသည်, သင်၏အခွန်နှင့်ကလေးအထောက်အပံ့အပေါ်လက်ရှိဖြစ်, နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများရှိသည်။ လိုင်စင်၏ ၅% ထက်ပိုသောမည်သူမဆိုမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့အဆိုပြုထားတဲ့အလုပ်အကိုင်အလေ့အကျင့်ကိုလည်းဖော်ပြပါ။
ဤတွင်ဘယ်မှာင် ပြည်နယ်၏လူ ဦး ရေကိုထင်ဟပ်သည့်ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အီလီနွိုက်ပြည်နယ် '' လူမှုရေးသာတူညီမျှ၏အမှတ်တံဆိပ် - ထိုအလုပ်အကိုင်အလေ့အကျင့်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီအားလူနည်းစုများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ စစ်ပြန်များ၊ မသန်စွမ်းသူများကိုမည်သို့အကြောင်းကြား၊ ငှားရမ်း၊ ပညာပေးမည်ကိုပြသရမည်။
ထပ်မံ၍ - အချိုးအစားမမျှတသည့်သက်ရောက်မှုရှိသည့်ဒေသတွင်စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်တိုးမြှင့်ပေးသည့်အတွေ့အကြုံသို့မဟုတ်စီးပွားရေးအလေ့အကျင့်ကိုသရုပ်ပြရမည်။ ဤမြေပုံများသည်အခြေခံအားဖြင့်ပြည်နယ်အတွင်းရှိမြို့ပြဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် - သူတို့သည်ပြည်နယ်ကိုဖော်ပြပြီးတရားဝင်မြေပုံသည် DCEO ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် online ဖြစ်သည်။ လျှောက်ထားသူသည်လူမှုရေးသာတူညီမျှလျှောက်ထားသူဖြစ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ သူတို့၏ရမှတ် ၂၀% ရှိသည်။
ထိုအခါလျှောက်လွှာ infuser ၏အရည်အချင်း၏ nitty gritty ပြန်ရောက်လာတယ် - သူတို့ဆေးခြောက်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်ရှိရာပူးတွဲသော့ခတ်စက်ရုံနှင့်ပတ်သက်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ရန်လိုအပ်သည်။ စီးပွားဖြစ်မီးဖိုချောင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဓာတ်ခွဲခန်းပြုလုပ်သောသင်၏လူတို့၏စားသုံးမှုအတွက်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်သင်၏အတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြရမည်။ ထို့နောက်သင်နှင့်သင်၏အဖွဲ့သည်ဤအစားအစာနှင့်ဆိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရှိသည့်မည်သည့်ဒီဂရီသို့မဟုတ်အောင်လက်မှတ်ကိုမဆိုစာရင်းပြုစုပါ။
စက်ရုံ၏သင့်တော်မှု - အကယ်၍ သင်၏စက်ရုံပေါ်တွင်စျေးပေါမည်ဟုသင်ထင်လျှင်၊ သင်ဘာလုပ်ချင်သည်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ - အဆောက်အအုံသည်ကောင်းမွန်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရပြီးစွမ်းအင်ချွေတာသည်။
ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်၏သင့်လျော်မှု - အတွေ့အကြုံရ
လုံခြုံရေးနှင့်မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းရေးမူဝါဒ - စက်မှုလုပ်ငန်း၏ကျောရိုး - တွင် ၂၄ နာရီ AV စောင့်ကြည့်ခြင်းလည်းပါ ၀ င်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအစီအစဉ် - အကယ်၍ သင်သည်ဆေးများကိုလွယ်ကူစွာအရည်အချင်းပြည့်မီအောင်သေချာစေပြီး THC နှင့်ကလေးများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်ကွန်တိန်နာများ၏သတိပေးချက်များကိုလက်မခံပါ။
(ဤအချက်၏အသေးငယ်ဆုံးအချက်များမှ -2%) ပတ် ၀ န်းကျင်အချက်များ၊ မတူကွဲပြားမှုအစီအစဉ်၊ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်နှင့်ဝါရင့်ပိုင်ရှင်များ၊
အမှန်တကယ်တွင်ဥပဒေအရထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်သူများကိုဆေးခြောက်ပန်းခြံမှဆေးခြောက်ကိုထုတ်ယူခြင်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းရှိပရိုဆက်ဆာအဖြစ်သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ (410 ILCS 705 / 35-25 (n)) -
သို့သော် Ag ဌာနသည် infuser law မှခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်းပရိုဆက်ဆာလိုင်စင်ကိုတနေ့တွင်ဖွင့်နိုင်သည်။ Infuser ဥပဒေကခွင့်ပြုထားသည်၊ သို့သော်တံခါးပေါက်အပြင်ဘက်တွင် - စံပြပုံစံ Infuser လိုင်စင်သည်ထုတ်ယူမှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းမရှိပါ - သင်ကြီးထွားရန်လိုင်စင်လိုအပ်သည်။ ဒါ google ။
THC ထဲကို ၀ င်လာရင်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆေးခြောက်စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့နေကို googling ကနေကြိုက်နှစ်သက်ပြီးစာရင်းပေးသွင်းပါ။ ဆေးခြောက်ရှေ့နေ သို့မဟုတ် "infuser လိုင်စင်" နှင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် Lagunitas ဆေးခြောက်ဝါးမျိုခြင်းကိုခံစားနေမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။